Izisho ZikaNovemba - Isimo Sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UNovemba yinyanga yenguquko. Sisuke ekubeni nesikhathi esimnandi saya ezinsukwini ebeziqala ukubanda, imvula futhi zibe mfushane. Maphakathi nekwindla, izihlahla ezinamakhaza zishintsha ukubukeka kwemibala ngombala ophuzi, obomvu noma owolintshi, ziziphendule izindawo ezinhle. Izilwane zilwela ukuqoqa ukudla okuningi ngangokunokwenzeka, futhi abantu baphoqeleka ukuba baqale ukukhipha izingubo ezifudumele.
Njengenjwayelo, emakhulwini eminyaka imishwana ethile iphindaphindwe ukuthi namuhla isebenza njengomhlahlandlela wokwazi ukuthi silindelwe isikhathi esinjani. Kulesi senzakalo, sizobona ukuthi i- izisho zikaNovemba.
1 Siyoba yini isimo sezulu eSpain ngoNovemba?
2 Izisho zenyanga kaNovemba
Siyoba yini isimo sezulu eSpain ngoNovemba?
Kule nyanga eSpain kuvame ukuba nokuncane kakhulu kwayo yonke into: enyakatho yezwe imvula imvamisa iba ningi kakhulu, futhi amazinga okushisa abe phansi kakhulu kuze kuvele isithwathwa sokuqala nokuwa kweqhwa; Eningizimu, kunalokho, kungaba nohlelo lokucindezela okuphezulu okuyivikela okwesikhashana emakhazeni. Noma, yebo, ebusuku kuphola cishe kuyo yonke indawo yaseSpain, ngakho-ke kungadingeka ukukhipha ingubo.
Amahora okukhanya kwemini ayancipha kanti nobusuku, kunalokho, buba bude, ukuze, kanye nomoya oqhubeka ungazinzi, labo abathanda ukuphuma bayofuna amakhowe ezintabeni nakanjani bazowathokozela. .
Sazise kabanzi ngalesi sihloko ngokusebenzisa izisho.
Izisho zenyanga kaNovemba
Lapho kuphela uNovemba, ubusika buqala: futhi kuyiqiniso. Uma kuphela inyanga yeshumi nanye yonyaka, sekuyisikhathi sokukhipha, yebo noma yebo, amajazi uma usenyakatho, noma amajakhethi uma useningizimu, ngoba amazinga okushisa abanda kakhulu ukuqhubeka nokugqoka izingubo ezintsha.
Kusukela ngomhla ka-XNUMX kuNovemba kuya phambili, ubusika sebuvele bukhona: kusukela ngalolo suku kuqhubeke, ngaphezulu noma ngaphansi, emiphakathini eminingi yaseSpain, ikakhulukazi leyo esenyakatho, kulapho amaqhwa okuqala ngokuvamile eqala ukuwa ngakho-ke, ubusika buya ngokuya bubonakala ngokwengeziwe.
KuSan Andrés, iqhwa ezinyaweni zakhoUsuku lukaSanta lungoNovemba 30, lapho iqhwa selivele selibonakele ezingxenyeni eziningi zezwe.
Kungenwa ngoNovemba, ngubani ongazange ahlwanyele lokho angahlwanyeli: Le yinyanga lapho kungaluleki ukutshala noma yini, ngoba amakhaza angazibulala izithombo ezinsukwini ezimbalwa nje.
Ihlobo laseSan Martín lihlala izinsuku ezintathu futhi liyaphelaUsuku lukaSanta lungoNovemba 11, okuyilapho amazinga okushisa ejwayele ukuba ngaphezu kwamanani ezinsuku ezidlule. Kepha uma kwenzeka, akusekho "ihlobo" engxenyeni esele yonyaka.
Ngabo Bonke Abangcwele, kubanda emasiminiUsuku lukaSanta lunguNovemba 1. Ngalolo suku ezingxenyeni eziningi zezwe sekuqale ukuphola.
Uma uNovemba eqala kahle, ukuzethemba kufanele kube nakho: uma inyanga iqala kahle, okungukuthi, uma amazinga okushisa emnandi nezimvula ziqala ukuba ningi, ngokuqinisekile kuzoba inyanga engeke ilethe isimanga esingalindelekile.
Umoya ohamba eSan Martín, uhlala kuze kube sekupheleni: umoya ongavunguza kusukela ngoNovemba 11 uvamise ukuba upholile, futhi uvutha kakhulu kwezinye izindawo.
Uma likhithika eSan Andrés, likhithika kakhulu kamuvausuku lukaSanta, njengoba sishilo, ngoNovemba 30. Uma likhithika ngalolo suku, kungenzeka ukuthi lizokhithika kakhulu ezinyangeni ezizayo 🙂.
KwabakwaSan Andrés, ubusuku bonke yibo: futhi kungabonakala, yebo. Isibhakabhaka esinamafu noma ngezikhawu zamafu, amahora amancane noma amancane okukhanya… kubukeka sengathi ubusuku bude ngokwengeziwe kunalokho empeleni okwenzayo.
UNovemba yihlobo umnyango wamakhaza: lokhu kufanele kubhekwe. Kulenyanga kuzofanele sivalelise ukushisa kuze kube unyaka ozayo, ngoba isimo sezulu sizobanda kakhulu.
KwiSan Martín, okuhle nokuncane kugqokiwe: Ngale panorama, ayikho enye ngaphandle kokuhlanganisa kahle ukuze uzivikele esimweni sezulu esibi.
KwabaNgcwele, iqhwa ezindaweni eziphakemeyo, nangoSan Andrés, ezinyaweni: Siqala inyanga ngeqhwa eziqongweni eziphakeme kakhulu, bese siyiphetha ngeqhwa eziqongweni eziphansi.
OkweSanta Catalina, ukuvimbela izinkuni kanye nofulawa: Usuku lukaSanta lungoNovemba 25, usuku lapho kungakuhle ukuthi ube nenani elihle lezinkuni zokubasa umlilo.
Okwa-Saint Eugene, ama-chestnut asemlilweni, umlilo eziko nezimvu okufanele ziqashwe: usuku lweNgcwele nguNovemba 15. Maphakathi nenyanga, kungakuhle ukuthi izilwane zigcinwe, ukudla nezinkuni.
Zikhona ezinye izisho zesimo sezulu ozaziyo zale nyanga?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izisho zikaNovemba